Ọkụ Halide Na-eto Eto Na-akọwa ma Nyochaa - Ime Ụlọ Na-Enwu Ọkụ
Specific Planlọ Osisi
Ọkụ Halide Na-eto Eto Na-akọwa ma Nyochaa
Kedu ihe na-eto Lighting Halide?
Dị iche nke Light Halide Light
Kedu mgbe I Kwesịrị Iji Mkpụrụ Ọhịa Na-eto?
Họrọ bọlbụ gị
Ido nghọta gị Metal Halide Too Light
Họrọ Ballast gị
Haldị Halide vs. HPS
Metal Halide vs. Ikanam
Metal Halide megide Ceramic Metal Halide
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ihe, ọ ga-abụrịrị na ị na-eleba anya na HID HIDs iji nye ogige gị ezigbo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma.
Metal Halide amụbawo ọkụ anọwo n'ahịa ruo ogologo oge iji gosipụta onwe ha dị ka otu n'ime ọkacha mmasị na-aga ịmalite ọkụ maka ito eto na-eto eto hiri nne, mara mma ma na-edozi ahụ.
Edebela m ntuziaka a iji nyere gị aka ịmụ banyere Metal Halide na-eto eto ọkụ, otu ha si arụ ọrụ, uru ha, na ọghọm ha.
Anyị ga-eji ha tụnyere ndị ọzọ na-eto eto ndị ọzọ dị ka HPS, Ceramic MH na LEDs iji nyere gị aka ikpebi ma ha bụ ezigbo mgbakwunye na ogige gị dị ka isi ma ọ bụ mgbakwunye ọkụ.
Mkpụrụ ala dị iche iche bụ ụdị oriọna HID a na-ahụkarị dị ka otu n'ime ụzọ kacha mma na-eto eto maka ahịhịa na-eto eto. Ha anọwo kemgbe mmalite 60 wee mepụtawanye maka ọtụtụ ngwa dị ka isi ụgbọ ala, ọkụ n'okporo ámá na ọkacha mmasị anyị: Na-eto eto ahịhịa ndụ!
A na-eme ha yiri nnọọ nke Mercury Vapor Lamps na ihe dị iche na ha nwere ihe ndị ọzọ dị na halide quartz aak tube, iji melite arụmọrụ na agba agba (CRI).
Manufacturersfọdụ ndị na-emepụta ihe na-agwakọta teknụzụ metal-halide na ndị ọzọ iji meziwanye ọkụ ọkụ ma gbakwunye ọdịiche ole na ole n'ime ụdị agba maka azịza zuru oke.
A na-ejikarị ha eme ihe na lumen dị elu nke ihe dị ka 100 lm kwa watt, ndụ oriọna nke ruru awa 20,000 na ọnụego mbibi mara mma dị mma. Nke a mere ka ha baa uru n’ubi anyị.
N'ihi ọdịdị nke usoro ndị na-eweta ọkụ n'ime oriọna ndị a, ha na-ewepụta ọkụ dị egwu na mpaghara ha. N’ezie, imetụ bọlb nke nọworo na-arụ ọrụ ruo ogologo oge pụrụ ịkpata ajọ ihe ọkụ.
Dị nnọọ ka bọlbụ HPS na CMH, bọl MH chọrọ ballast iji gbaa ọsọ. Ọ bụrụ na ọkụ bọlbụ ahụ sitere na isi iyi ọkụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile dị ka site na AC wiring, nke ugbu a ga-abawanye ruo mgbe bọlbụ ahụ ga-ebibi onwe ya.
Tupu anyị ahụ ma tulee ụdịdị dị iche iche nke HID HID, biko lee eserese a:
Chart nke usoro nzaghachi nke osisi na ihe omuma
Nke a bụ nkezi usoro nzaghachi ụdị osisi dị iche iche nke McCree dere. Hụ otu osisi si eji ọkụ mee ihe na PAR niile? Ọ bụ ezie na dị iche iche ikwu absorption udu niile na agba na-eji.
Rịba ama na enwere mmetụ dị ntakịrị ma dị egwu na ọkwa Infrared na UV. Osisi choro ihe nchacha nke na ejikọ otutu uzo di iche iche, obughi ngwakọta nke uhie na acha anụnụ anụnụ dika otutu mmadu chere. Nke a bụ otu n'ime uru nke Metal Halide HID na ụzọ ndị ọzọ na-enye ọkụ, ha na-ewepụta ụdị mbara igwe sara mbara nke osisi nwere ike iji mee ka ọ dị mma.
Ugbu a, nke a bụ ìhè dị iche iche nke ọkara Metal Halide na-eto eto:
Metal Halide MH ụdịdị dị iche iche. isi mmalite
Rịba ama ndị ahụ na-acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, odo na oroma? Nke ahụ bụ ebe agba agba nke ọkụ Metal Halide. Dịka ị pụrụ ịhụ, nchapụta ọkụ nke oriọna MH dabara nke ọma, ọ gụnyekwara oke ọkụ UV, ihe a niile jikọtara ọnụ na-eme ka ojiji ha dị ka azịza gbara gburugburu maka ndị na-eto eto.
Ha enweghị ya, n'agbanyeghị. Ngwongwo nke metal nwere oke ala na-acha uhie uhie nke ụdịdị dị iche iche, nke bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa nke ịmị mkpụrụ na ifuru ifuru.
Iji dozie ihe, ndị na-eto eto na-agbakwunye ọkụ ọkụ HPS n'ime ogige ha dị ka mgbakwunye mgbakwunye.
Nke a bụ ụdịdị dị iche iche nke HPS na-eto eto maka ntụnyere:
esi echekwa mkpụrụ ogologo oge
High Pressure Sodium (HPS) oriọna ụdịdị dị iche iche. isi mmalite
Rịba ama ka ọtụtụ ọkụ si na HPS na-apụta dị ka uhie, oroma, odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwere obere ọkụ na-acha anụnụ anụnụ nke ụdịdị dị iche iche. Ọ dị mma maka ifuru na ịmị mkpụrụ, mana ọ bụghị nke ọma maka uto ahihia.
Metal Halide eto ọkụ na-kacha mma ji maka vegetative ibu. Nke a pụtara na ha dị oke mma maka ime ka ihe ọkụkụ gị mepụta okpokoro osisi na ahịhịa nwere obere oghere internodal.
Ha zuru oke maka ịkọ ahịhịa dị iche iche dị ka letus, spinach, peppers, tomato, okooko osisi na ahịhịa na ọtụtụ ndị ọzọ.
MH bulbs dịkwa ezigbo mma na ịkwụsị ịgbatị. Mgbatị na-eme maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche, tumadi n'ihi na osisi anaghị enweta ọkụ zuru oke ma ọ bụ n'ihi na ha anaghị enweta ọkụ na-acha anụnụ anụnụ.
Ndị na-akụ HPS na-agbakwunye ọkụ MH n'ime ubi ha iji gbakwunye ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma mee ka ihe ọkụkụ ha ghara ịgbatị na ọkwa osisi dị iche iche.
Dị ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ bọlbụ HID ọ bụla, bọlbụ ọla na-abịa n'ọtụtụ nha. Ọnụ ọgụgụ akachasị eji eme ihe maka ime ụlọ na mgbakwunye ọkụ bụ 400, 600, 1000 watts. Na 600 na 1000 watt bọlbụ nha ịbụ ndị kasị oru oma omume.
Dịka ọmụmaatụ, bọmbụ 400W MH nwere ike ịpụta ihe dị ka lumen 85 kwa watt, ebe bululu 600w na-ewepụta gburugburu 100 lumen kwa watt.
Halides dị iche iche na-abịa ogologo oge, afọ ole na ole gara aga, a naghị edekarị ha maka ọnọdụ zuru ụwa ọnụ, ịkwesịrị iji nlezianya na-agbaso ndụmọdụ nke ndị na-emepụta iji kpebie otu ị ga-esi dobe ihe ngosi na bọlbụ gị. Ma ọ bụghị ọzọ. N'oge a, a na-ahọrọ bulbs ndị kachasị mma na-acha ọkụ ọkụ maka ọnọdụ zuru ụwa ọnụ.
Naanị jide n'aka na e depụtara ha maka ọnọdụ zuru ụwa ọnụ wee nweere onwe gị iji ya gwuo egwu ruo mgbe ịchọta ọnọdụ kachasị mma iji kwụnye MH gị na-eto eto.
Ndị a bụ ụfọdụ ederede m chịkọtara banyere akara ụkwụ halide na mkpuchi ọkụ:
400w aldị Halide
Ogologo Osisi : Ọ dịkarịa ala 14 ‘’ ma ọ bụ 30 cm dịpụrụ adịpụ nke mkpuchi gị
Na-atụ aro Mpaghara : Ruo 3.5 'x 3.5' ma ọ bụ 1.1m x 1.1
Ogologo Osisi : Ọ dịkarịa ala 18 ‘’ ma ọ bụ 45 cm dịpụrụ adịpụ nke mkpuchi gị
Na-atụ aro Mpaghara : Ruo 4.5 'x 4.5' ma ọ bụ 1.4m x 1.4m
Nke kachasị rụọ ọrụ nke ọma maka ọkụ HID, na-emepụta PAR kwa elekere kacha elu.
1000w aldị Halide
Ogologo Osisi : Ọ dịkarịa ala 24 ’’ ma ọ bụ 60 cm dịpụrụ adịpụ nke mkpuchi gị
Na-atụ aro Mpaghara : Ruo 5 'x 6' ma ọ bụ 1.6m x 1.8m
Nke a bụ nchịkọta nke ozi kachasị mkpa ị ga-achọ mgbe ị na-ahọrọ ballast maka ìhè gị metal-halide. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu, ịnwere ike lelee ntuziaka ballast anyị zuru ezu site na ịpị ebe a .
Otu ihe dị mkpa ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ ballast maka bọmbụ MH gị, bụ na njirimara nke sistemụ eletriki na-eme ka bọlbụ ahụ na nrụpụta nrụpụta dị iche iche na bọlbụ ahụ n'onwe ya ga-emetụta ọnọdụ agba ha.
Ọ bụrụ na bọlb nke nwere ọla-edo mebiri emebi, ọkụ ọkụ ya ga-acha ka ọ na-acha ọcha n'ihi anwụrụ nanị nke mercury. Ntughari a bu eziokwu maka oriọna anwuru ike, ma onodu a nwere ike buru ihe ojoo, nke nwere ike ibute ihe gbawara n'ihi ikpo oke oke na oke oke.
nghọta osisi na-acha odo odo na-acha akwụkwọ ndụ epupụta
Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịkụcha ọkụ maka bulb gị-halide bulb, ọ dị mfe: itinye ego na ballast kachasị mma ị nwere ike ịchọta iji mee ka bulbs gị na-arụ ọrụ nke ọma.
Ngwongwo elektrọn dị elu nwere ike na-achọpụta ụdị bọlbụ ha na-agba ma gbanwee ya. Nke a ga - eme ka bọlbụ ahụ dị ogologo na agba agba.
Maka ịdị mfe nke iji ya, A na-atụ aro ka ị nweta ballast nke dijitalụ, dimmable, ma na-akwado ma bọmbụ HPS na MH. Nke a na - enye gị mgbanwe kachasị.
Cheta… arụmọrụ na-amalite na ballast gị, yabụ gbaa mbọ hụ na ị họọrọ nke kachasị mma.
Anyị ahụworị ọdịiche dị iche iche n'etiti oriọna HPS abụọ a. Ha abụọ dị mma maka ihe ha na-eme. Enweghi asọmpi n'etiti ọkụ HID ndị a, ọ ga-abụ ihe ezighi ezi iji tụnyere ha abụọ. Ha abuo di nma na ihe eji ha.
Ọkụ ndị na-acha ọkụ ọkụ dị oke mma maka ime ka osisi gị too na ahịhịa nke ahịhịa, yana oghere ndị nwere ume, ma tinye akọrọ dị mma. Nnukwu nrụgide Sodium bulbs n'akụkụ nke ọzọ dị mma ma a bịa n'ịba ụba ifuru gị na uto mkpụrụ.
Ọ dị mma ịkọba ama na ọkụ HID ndị a na-adịkarị ọnụ. Hbs bọlbụ na-enwekarị nwayọọ mbibi udu.
Na usoro iwu, n'ihi ọdịdị nke etu ha si emepụta teknụzụ ọkụ dị elu karịa teknụzụ HID ọ bụla n'ihi na ọ nwere ike ịdọrọ (dị ka ọ dị mkpa) akụkụ ọ bụla nke Photosynthetic Response Spectrum akọwapụtara na-enweghị ịmịpụta n'okpuru ọkụ na-enweghị ike ma na-emebi ike. Nke ahụ bụ usoro iwu. Mana n'ime ụwa n'ezie, ngwọta LED zuru oke ma dịkwa ọnụ ala ka na-arụ ọrụ.
Nnukwu uru nke ndị LED n'elu ọla-halide na-eto eto ọkụ bụ nrụpụta ọkụ ha dị ala karị. Enwere ike ịhụ nke a na plethora nke ikanam na-etolite ngwaahịa ọkụ n'ahịa na-etu ọnụ na ha na-arụ ọrụ enweghị atụ, nke na-anaghị ekwe omume mgbe ị na-agba bọlbụ na-acha ọkụ. Ndị na-acha ọkụ ọkụ nwekwara oge ọrụ ka ogologo oge na-enweghị mkpa ndochi.
N'agbanyeghị, a ka nwere ebe maka metal-halides n'ubi gị. Mgbe ahụ, a ga-achịkọta MH uru karịa LED dị ka ndị a:
Ọnụ mmeghe dị ala
Ihe ngosiputara ma nweta uzo iji mee ka ahihia gi
Nke a bụ ihe ngwa ngwa na MH vs. CMH ọkụ. Maka nkọwa zuru ezu karị, lelee ihe omimi m na ọkụ seramiiki ọla ọkụ .
Nke mbu, cheta na n’agbanyeghi na ihe yiri ya, CMH na MH abughi otu. Maka ebumnuche nyocha, naanị mwepu m nwere ike iche banyere CMH karịa MH bụ ụgwọ mbụ.
Site na nke ahụ, anyị emeela ka o doo anya na CMH nwere ụdịdị dị mma karịa MH, yana nchapụta ọkụ na-acha uhie uhie na ọcha dị elu. CMH na-eto eto na-ajụkwa oyi, ma mepụta ọtụtụ ọkụ PAR ma e jiri ya tụnyere watt kwa watt.
Ihe kachasị anya bụ oge mmebi. Standard MH bulbs nwere ngụkọta ndụ nke gburugburu 20,000 awa, ma a ngwa ngwa mbibi. Nke na-erughị 24,000 Awa na CMH e gosiri maka.
Improveddị dị iche iche dị mma n'ụzọ dị mkpa nke ọma na mmelite nke ọma dị mkpa na reds n'elu MH
Oge ndụ dị oke mkpa.
Anyị ahụla ka igwe-halide na-eto eto ọkụ si dabara nke ọma n'otu ebe n'ahịa ha kwesiri. Ugbu a, anyị nwere ike ịghọta ihe mere eji ahụkarị ha n’ubi, n’ihi na ụdịdị ha dị iche iche bụ ihe osisi hụrụ n’anya na-eto n’okpuru. MH na-eto eto bụ nnukwu ego mgbakwunye na ogige gị.
Ugboro Ogba Ugbo
esi na-emeso whiteflies na osisi
obere chinchi na-acha ọcha na osisi osisi
ihe kacha mma odida obodo ákwà
gịnị ka osisi liik yiri?